Emechiela okwu RUGA | odumblog
Emechiela okwu RUGA
posted on Jul. 05, 2019 at 8:03 am
Onyeisi ala Muhammadu Buhari ekwuola n’ụbọchị Wenesde na emechiela okwu gbasara Ruga settlement nke emeburu ka enwe ike nye ndi na-achị ehi na ehi ha ebe obibi na steeti ndi nọ n’obodo a.
O kwuru nke a n’Abuja ka gọvanọ ndi na-anọchị anya geopolitical zone isii nwechara nzuko, ha na onye na-esote onyeisi ala bụ Yemi Osibanjo na Presidential Villa, Abuja. Ọ bụ onyeisi oche National Committee on Food Security/Herders/Farmers Conflict na Gọvanọ ndi Ebonyi bụ Mz. Dave Umahi gwara ọhanaeze ihe ha metara na nzuko a.
Umahi kọwara na atụmatụ Ruga settlement adabaghi n’atụmatụ nke National Livestock Transformation Plan bụ nke ndi National Economic Council kwadoro ebe onye na-esote onyeisi ala, Yemi Osibanjo bụ onyeisi oche NEC.
Samuel Ortom bụ gọvanọ ndi Benue Steeti kelere Buhari maka okwu Ruga o mere ka ọ bụrụ ihe gara aga. O kwuru na nke a bụ mmeri nyere ndi Naijiria hụrụ udo n’anya. O kwukwara na nke a gosiri na onyeisi ala nụrụ olu di mmadu ma gee ha nti. Ọ gwara gọọmenti etiti ka ha gwa ndi na-achị ehi ka a chọọ ụzọ kwesirir ekwesi iji zụọ ehi ha.
Ndi Ọhanaeze ndi Igbo kelekwara Buhari ma gwa ya ka o jisie ike napụ ndi na-achị ehi ngwa agha nke ha na-ebuhari.
Otu ndi Yoruba bụ Afenifere kwuru na ihe kpatara Buhari jiri mechie okwu a bụ ka o nwee ike zụtakwuo oge iji mee ihe sọrọ ya. O kwuru ka ebe ọ bụ na emechighi okwu kpam kpam, na agwọ ka nọ n’akịrịka. Onye na-ekwuchitere ndi Afenifere ọnụ, Yinka Odumakin kwuru ka eleba anya na ihe gbasara obodo ka amara ma a ga-ekewa obodo a.
Onuorah Jennifer July 5, 2019
Ndi Fulani na-achị ehi na-eyi anyị egwu: Mahadum Illorin
Download OGBI by Seven Seven